Wasiir Maxamed Muuse, Somaliland: “Doorasho way ka Dhicin Sool iyo Sanaag … Dadkuna ma Rabaan Farriimo Meelo Kale laga soo Diray” (dhegayso) – Radio Daljir
Agoosto 12, 2017 7:13 g 0
Wasiiru dowlaha arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa mar kale ku celiyay in ay doorasho ka qabanayaan gobolada Sool iyo Sanaag oo kal hore ay ka dhaceen dagaalo soo noqnoqday oo dhexmaray Puntland iyo Somaliland.
Wasiirka oo dabasocday hadalkii wasiirka warfaafinta Puntland Cabdixirsi Cali Qarjab ee shalay uu ku sheegay Somaliland in ay ku soo xadgudbi karin gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ayuu sheegay wasiirka u hadlay Somaliland in ay doorashada ka dhacayso deegaanadaas, isaga oo sheegay in “dadka deegaanku aanay rabin farriimo meelo kale looga soo diray.”
Somaliland ayaa abaabul ugu jirta doorashada madaxtooyada Somaliland, iyadoona sanadiiqda doorashada la sheegay in la gaynayo dhamaan dhulkii uu Ingiriiska gumaysan jiray ee waqooyiga Soomaaliya oo ay Somaliland ku doodayso in ay iyadu maamusho.
Maanta ayaan magaalada Xallin ee gobolka Sool ciidamada Somaliland keeneen sanaadiiqda doorashada, waxaana halkaas ka dhashay khasaare loo gaystay dadka deegaanka. Ciidamada Puntland ayaan illaa iyo hadda wax gacan ah siin dadka deegaanka, waxaana baaq gurmad ah dalbaday guddoomiyaha degmada Xallin oo waraysi siiyey Radio Daljir.
Illaa iyo hadda wax jawaab ah ma uu bixin Wasiir Qarjab oo shalay waraysi uu Daljir siiyey ku sheegay in aan doorasho ka dhici doonin deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn.